Vondrona eoropeanina : 20 tapitrisa euros hanatsarana ny fambolena | NewsMada
Vondrona eoropeanina : 20 tapitrisa euros hanatsarana ny fambolena
Par Taratra sur 20/11/2017
Nitsidika ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana, Randriarimanana Harison, ny 15 novambra teo, ny delegasiona avy amin’ny Vondrona eoropeanina (UE). Nitarika azy ireo ny solontena maharitry ny UE eto amintsika, Antonio Sanchez-Benedito.
Ataon’ny UE laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny fambolena eto Madagasikara. Mitentina 130 tapitrisa euros ny vola omeny, tsy averina, ho an’ity sehatra ity ao anatin’ny Tahiry eoropeanina ho an’ny fampandrosoana andiany fahafolo (10è Fed), ary hiditra amin’ny andiany faha-11, ankehitriny. Mandritra izany, nanokana 20 tapitrisa euros ny UE, entina hanatsarana ny fitantanana avy amin’ny Tahiry eoropeanina ho an’ny fambolena.
Misy koa sehatra hafa ampian’ity vondrona iraisam-pirenena ity, toy ny fanohanana ny dingam-pihariana manana ny lanjany (chaîne de valeurs), mitondra fampandrosoana sy mamorona asa.
Nilaza ny solontenan’ny UE, Antonio Sanchez-Benedito, fa maro ny fanamby sy ezaka mila atao satria mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny 80%-n’ny Malagasy. Tsy mitondra fampandrosoana anefa izany satria zara raha miantoka ny 10 hatramin’ny 20%-n’ny Harinkarena faoben’ny firenena (PIB). Misy anefa ny vahaolana hamahana izany, satria maro ny fomba azo atao sy ampiroboroboina, toy ny fanamafisana ny fanondranana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana any ivelany amin’ny alalan’ny fanatsarana ny kalitao sy ny lafiny fahadiovana sy ny fahasalamana.